Best Answers – Kobci Aqoontaada
Home/ admin/Best Answers
Asked: February 24, 2019 In: Communication
Waa maxay faham kaab muxuuse faaido iileeyahay?
admin	Professional	fahamkaab@gmail.com
Added an answer on February 24, 2019 at 11:52 am
Faham kaab waa madal ama meel aad su’aalahaaga ugu heli karto jawaabo badan oo kala duwan kuwaas oo ay kaaga jawaabayaan saaxiibbo kaa aqoon iyo qibrad duwan. Sidoo kale, waa madal aad kula saaxiibi karto saaxiibbo aad isku taqasus ama himillo tihiin adoo si fudud ubooqanaya profile-ka saaxiibka aadRead more
Faham kaab waa madal ama meel aad su’aalahaaga ugu heli karto jawaabo badan oo kala duwan kuwaas oo ay kaaga jawaabayaan saaxiibbo kaa aqoon iyo qibrad duwan.
Sidoo kale, waa madal aad kula saaxiibi karto saaxiibbo aad isku taqasus ama himillo tihiin adoo si fudud ubooqanaya profile-ka saaxiibka aad rabtid inaa la xariirtid sidaasna aad ugu darsatid baraha bulsho ee uu soo bandhigtay/bandhigatay.
Dabcan sidoo kale waa meel aad saaxiibbo badan aad aqoon uga biirin kartid.
Qofwalba oo faham kaab kusoo biira waxaan unaqaannaa saaxiib, marka, soo dhawow saaxiib kuna istareex faham kaab.